Na mgbakwunye na oge ibupute peeji dị mkpirikpi, ịnwe ọnụnọ weebụ gị maka ngwaọrụ dị iche iche dị ezigbo mkpa iji mepụta nnukwu ahụmịhe ndị ahịa. Gba ọrụ web imewe (RWD) nwere ike ịbụ ụzọ dị mma iji nyere aka mee nke a. Dịka ọmụmaatụ, RWD na-achọpụta na mgbe onye na-ere ahịa ma ọ bụ mbadamba nkume na-eleta weebụsaịtị, ihe onyonyo dị mmiri mmiri na akụ ndị ọzọ na-atụle nke ọma, yabụ ndị ọrụ anaghị anwa ịnyagharịa ụdị desktọọpụ nke weebụsaịtị site na-akụ na mbugharị. Otú ọ dị, RWD nwere ihu ala na ọ nwere ike ịdaba na nbudata ebe ọ na-eziga otu ihe oyiyi na HTML na ngwaọrụ mkpanaka ọ na-ezigara na desktọọpụ. Iji RWD ejiri saịtị njirimara njirimara nwere ike ịhazi ọdịnaya dị na ngwaọrụ dị iche iche ma belata nha nke nbudata peeji nke ma bulie arụmọrụ.
Ọ bụ ezie na RWD ga-eme ka onyonyo ahụ dị mmiri mmiri ka ha dabaa nke ọma dabere na nha ihuenyo ngwaọrụ, ọ ka ga-eji otu nha onyogho gosipụtara na desktọọpụ. Nke a nwere ike ịpụta na ndị ọrụ gị na 3G dị nwayọ nwayọ ma ọ bụ netwọkụ latency dị mkpa iji budata onyonyo nke nwere ọtụtụ megabytes naanị ka ọ gosi ha na nha stampụ nha. Ihe ngwọta bụ iziga onye ọrụ naanị nha nke onyogho kwesiri maka ọnọdụ netwọk ha ugbu a. Ntughari onyonyo na - eme nke a site na ichebara ihe jikotara ya na ntaneti nke oge a, ntughari ya na ihe ndi ozo na - eme ka ihe onyonyo di na oge iji nye nguzozi n'etiti ogo onyonyo na oge nbudata iji hụ na ndị ọrụ nwere ike inweta onyonyo di elu ma ghara ịta ahụhụ site na nwayọ .
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọ bụrụ na ị na-echekwa ọdịnaya naanị, ị na-efu ọtụtụ elele nke usoro ikpo okwu nwere ọgụgụ isi. Ndị na-ere ahịa ga-amata ma na-achọ nkà na ụzụ dị ka ndị na-azụ ha ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịga nke ọma. Ọ bụrụ na nke a dị ka usoro karịrị akarị, ọ gaghị adị mkpa. Enwere ndị ọkachamara dị iche iche iji nyere gị aka duzie gị ọrụ ndị dabara adaba maka mkpa ụlọ ọrụ gị yana nke ndị ọrụ njedebe gị.